ब्रह्मलुट : एकै नेकपाका ओली र प्रचण्डका २ प्रमुख सचेतकलाई मन्त्रीसरह सुविधा र गाडी ! - Media Dabali
ब्रह्मलुट : एकै नेकपाका ओली र प्रचण्डका २ प्रमुख सचेतकलाई मन्त्रीसरह सुविधा र गाडी !
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादले संसदका कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ ।
संसद विघटनअघि र पुनर्स्थापनापछिको संसद बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपा भित्रको विचलनले अप्ठ्यारो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ ।
अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरुमा हुने व्यवस्थापनमा संसद सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सतर्क छ, राजनीतिक विषयमा दलहरु नमिलेसम्म सचिवालयले एक्लै निर्णय लिन सक्दैन,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आईतवार संसद् सचिवालयमा लिखित रुपमा गराइएको छ ।
‘नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले नै ह्विप लगाउनुहुन्छ, अब देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकका रुपमा नेकपाले चिन्दैन’ भन्दै नेकपा ओली पक्षका नेताहरुले भनिरहेका छन् तर गुरुङले आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन् ।
‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइएका व्यक्ति (प्रम ओली) बाट मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ ।’
प्रमुख सचेतक आफू नै रहेको दाबी गर्ने सांसद देव गुरुङ र सोही पदमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नियुक्त सांसद विशाल भट्टराईमध्ये नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतकको मान्यता कसलाई दिने भन्नेमा संसद सचिवालय मौन छ । दुवै जनाले प्रमुख सचेतकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकमा उनीहरुबाट लगाइने ह्वीप कसकोलाई मान्ने भनेर नेकपाका सांसदहरू समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन् ।
संसद सचिवालयलले प्रमुख सचेतकलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिँदै आएको छ । यो सुविधा दुबै प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ । ‘नेकपाका प्रमुख सचेतकमा नियुक्त विशाल भट्टराईले आईतवार प्रमुख सचेतकले पाउने अन्य सुविधासहित एउटा स्कोर्पियो गाडी लगेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्का प्रमुख सचेतक गुरुङले ३ वर्षदेखि नै त्यस किसिमको सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो सुविधा अहिले पनि कायम छ ।’
नेकपाभित्र २ जना प्रमुख सचेतक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकमा नेकपाबाट कसलाई बोलाउने भन्ने समस्या आएको छ । फागुन २३ गते संसद् बैठक सुरू हुनुअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३ बमोजिम बैठकका एजेन्डा तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गर्छ ।
बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी १७ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ ।
बैठकमा सभामुखले नेकपाका दुबै प्रमुख सचेतकलाई बोलाउने कि एउटालाई भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आन्तरिक छलफल सुरू गरेका छन् ।
कानूनी रुपमा नेकपा एउटै भएकाले २ जनालाई प्रमुख सचेतक कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छ । तर राजनीतिक विषय पनि भएकाले यसबारे सभामुखले राजनीतिक छलफल सुरू गरेको स्रोतको भनाइ छ । दुबै प्रमुख सचेतकलाई दलको हैसियतले बोलाउने वा सदस्यका रुपमा आमन्त्रित गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । नियम १३ को उपनियम ३ मा ‘सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयमा अहिले आधिकारिक पार्टी नेकपा मात्रै रहेको अभिलेख छ । नेकपाले जसलाई प्रमुख सचेतक बनाएको छ, उनैलाई नै बैठकको निम्तो दिनेछ । तर यतिबेला भने राजनीतिक विषय भएकाले दुबैलाई निम्तो दिने तयारीमा संसद् सचिवालय रहेको छ ।
संसदभित्र दुबै दल फुटेको कानूनी आधार नदेखिएकाले नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र ओली पक्षलाई सत्तापक्षकै सिटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदीय दलबाट र संसदबाट ओलीलाई नहटाएसम्म संसद सचिवालयको रेकर्डमा संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली नै छन् । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले संसदले कानूनी कुरा मात्र हेर्नुपर्ने भएकाले अन्य कुरामा जान नसक्ने बताए ।
‘दुबै पार्टी फरक छन् । यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषय दलहरुले नै मिलाउने हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषय मात्र हामीले मिलाउने हो ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबीचको द्वन्द्वले संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतम दोहोरो चपेटोमा परिसकेका छन् ।
संवैधानिक नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ हुने/नहुने विषयमा दुबै पक्षबीच एकअर्काले प्रकाशित गरेका विरोधाभासपूर्ण विज्ञप्तिको साक्षी महासविच डा. गौतम बसेका थिए ।
राजनीतिक विवादबीच प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ गतेबाट सुरू हुँदै गर्दा अझै कस्ता कठिनाइ आउने हुन् भनेर सचिवालयका अधिकारी तनावमा परेको स्रोतले बताएको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । पुस १७ गतेभित्र बस्नुपर्ने संसद् बैठक पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेपछि २ महिना अन्योलमा परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन भनेपछि २३ गतेदेखि अधिवेशन बोलाइएको छ । संसद बैठकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सचिवालयले सांसदहरुलाई खोप लगाउने र एक सिटको फरकमा भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।